Dowladda Soomaaliya oo war kasoo saartay weeraradii lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-shabaab (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Soomaaliya oo war kasoo saartay weeraradii lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-shabaab (AKHRISO)
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeeysay war kasoo saartay howlgalo ay ciidamada Kumaandooska ee dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamo Mareykan ah ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka J/dhexe.
War-saxaafadeed caawa kasoo baxay wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howl galo qorsheysan oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Kumaandooska DANAB oo kaashanaya kuwa Mareykan ah ay ka fuliyeen deegaanada Sunguuni, Jilib iyo Saakow ee gobolka J/dhexe.
Howlgalka deegaanka Sunguuni ayaa la sheegay in lagu bur-buriyay saldhig ay Al-shabaab ku laheyd iyo koontarool ay lacago baad ah ku qaadi jireen.
Sidoo kale howlgalka kale ee laga sameeyay degmada Jilib, gaar ahaan tuuladda Hargeysa-yareey ayaa sida la sheegay lagu gubay gaadiid dagaal oo ay leeyihiin Al-shabaab, laguna dilay tiro maleshiyaad ah, sida lagu soo qoray war-saxaafadeedka.
Dhinaca kale, war-saxaafadeedka laguma sheegin in howlgalka lagu qaaday deegaanka Saakow lagu dilay sarkaal muhiim ah, islamarkaana lagu soo qabtay hub iyo saanad ciidan, sida ay daabacday wakaaladda wararka Xinhua ee laga leeyahay dalka Shiinaha.
Ugu dambeyntii, maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray warar la isla dhex maraayay oo sheegayay in howlgal ka dhacay degmada Saakow lagu dilay saraakiil sare sida amiirka kooxda iyo afhayeenka howlgalada, laakiin waxaa muuqata in dowlada federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka aysan ilaa haatan heynin xaqiiqo weerarkaasi ku saabsan.